War niman yohow Raggii meeye?
Hordhac iyo afeef
In muddo ah ayaan ka fakarayay diyaarinta iyo qoridda maqaalkaan. Waxaan ugu horreyntiiba, ku mahadinayaa Allahii igu dhaliyay, iina sahlay curinta maqaalkaan.
Hadafkaygu wuxuu yahay, bal inaan isku dayo, inaan sharraxaad guud ka bixiyo astaamaha muuqda iyo kuwa qarsoon ee xanuunka bulshadeenna haya.
Ruuxii buka ama jirran, marka hore waa la baaraa, si loo helo nooca cudurka. Markii cudurka la gartana, daawo (hadduu leeyahay) ayaa loo qoraa, waxaana ka dhasha ruuxii oo biskooda.
Waxaan maqaalkaan dheer ku lafagurayaa, bal iney suuroobi karto in waalli fayow ama cudur ladan la daaweyn karo ama laga biskoon karo iyo in kale? Sidoo kale, waxaan ku eegayaa, bal in waalidaan fayow ay tahay mid laga dhaxlay awooweyaasheen (sida dhiig- karka, neefta iwm); iyo inay tahay mid geyiga geeska Afrika laga qaaday(sida sanboorka, duumada iwm); iyo/ama inay tahay mid dad shisheeye nugu rideen( sida Gumeysigii reer Yurub).
Nuxurka maqaalku wuxuu ka shidaal qaatay isku dhafka wax aan maqlay…arkay… ku fakaray…ku hammiyey…mala awaalay…odorosay…sahamiyey…amaba aan ku khilaaweeyay!!!
Tu kalena, waxay tahay, waxaa dhici karta, inaan hadba, sida aan wax uga soo xusuusto, aan wax uga soo xigto maqaal aan 1996kii qorey oo aan BBC(da), laanta af Soomaaliga u direy, laakiinse aysan soo dayn. Cinwaanka maqaalku wuxuu ahaa: “Takarafowfow…sidee dawlad loo dhalaa?”
Maadaama Soomaalida lugu tilmaamo dad isleh, oo isku isir, diin, af iyo dhaqan ah, ayaan aragti ahaan, ku sifeeyey jir bani aadan(human body) oo kale.Waxaa la yiri , ruuxii raba inuu arko Ilaahay, ha fiirsho uunkiisa. Akhristow, adigoon meel kale aadin, bal adigu is fiiri. Jirkaaga ku khilaawee. Xubnaha jirkaagu ka kooban yahay; sidey isugu xir xiran yihiin;sidey u wada shaqaynayan; sideeyan u kala maarmin; sidey u wada xanuunsadaan!! Haddaba, si fahmidda shaxda maqaalku ay kuugu sahlanaato:Ereyada hoos ku qoran, macnaha ku hor qoran baan ula jeedaa:-
Jirka Soomaaliga (Somali body) = Ummadda Soomaaliyeed.
Xubnaha jirka(body organs) = kuwa lugu abtirsado, sida Jilibyahan, Suxulyahan, iwm.
Maskaxda jirka Soomaaliga(brain of Somali body) = Dowlad ama Qaranimo.
Unugyada xubnaha = Shakhsiyaadka ay xubini ka samaysan tahay amaba ku dhexjira.
Maskaxda = Dowladnimo / qaybta unuggu(qofku) wax ku garto;
Rooxaan = Awoodda unug ku garto hadba xubinta keliya ee uu isu haysto inuu yahay.
Burji = haybadda ka soo baxda maskaxda xubnaheeda oo dhammi wada ifayaan ee unug(qof) kaamil ah isu aragta.
Virus Q = Qabyaaladda.
Waxaan ka afeefanayaa habka iyo hannaanka aan maqaalkaan u qoray. Waxaan si ula kac ah, uga weecday hababka iyo nidaamyada wax loo qoro. Waxaa dhici karta, inaan dhawr sadar, bog barkii ama bog keliya uga hadlo dhawr arrimood oo aan shaqo isku lahayn. Hadba sida maskaxdu u godlato…inta gacantu qalinka hayso… ayaan maqaalka u soo lisay!
Aragti ahaan, afkaarta maqaalka waan isku dhex yaaciyay (Buufis-style)…Si ay sawir ugu noqoto ama ay uga tarjunto isku dhex-yaacsanaanta iyo jahwareerka xaalka tolweynaha Soomaalida.
Waxaan si gaar ah, akhristayaasha uga raalli gelinayaa isticmaalidda xuruuf, ereyo ama weero af shisheeye ku qoran oo aan ka fursan waayay. Sidoo kale, waxaa dhici karta in akhrinta maqaalku ay dhaliso xanuun ama daqnasho. Takhtarradu markay rabaan inay nabar ama boog kaa dhayaan xanuun baa ka dhasha. Anigu takhtar ma ihi waxaanse is iri nabarrada inagu yaalla qolfaha ama diirka ka fuji , si inta loo dhayo ay Eebbe idankiis u biskoodaan.
Ugu dambaystii,waxaan waxgaradka Soomaaliyeed (Rag & Dumar) ee laga tirada badan yahay, ee aan u arko inay Others(ka) runta ah yihiin, ka codsanayaa in wixii gafaf kama’ ah , ee uga muuqda maqaalkaan, iney i tusaan, iina so gudbiyaan talooyinkooda ku wajahan.
Wixii ka yimaada maqaalkaan – shar iyo khayrba – aniga keliya ayaa ka mas’uul ah ee taa hala ogaado. *******************************************
Aan ku bilaabee, waa maxay farqiga u dhexeeya niman iyo rag – ama naago iyo dumar? Waxay wada muujinayaan labada jinsi ee xoolaha, dhirta iyo dadku u qaybsamaan – lab iyo dhedig. Rag iyo Dumar waa magacyo wadareed(plural names) oo keli(singular) ma leh. Labada kalese way leeyihiin oo waa nin iyo naag. Ninkii astaamo sare sida geesinimo, codkarnimo, deeqsinimo, hoggaamiyenimo, iwm. la soo baxa ayaa la yiraahdaa wan nin rag ah. Halkaas waxaa kaaga muuqanaysa in Raganimadu ay tahay maqaam ama darajo uusan nin waliba gaari ama yeelan Karin. Nin nin ka tegey oo keliya ayaa darajada raganimada kasban kara. Haddaba, inkastoo aynaan dhaqan iyo hiddo u lahayn, sow lama oran kari karin ‘naag naag ka tagtay oo keliya ayaa darajada Dumarnimada kasban karta.’ Dhaqanka iyo afka ayaa hor istaagay oo lama oran karo naag dumar ah – sida loo yiraahdo nin rag ah.Waxa keliya oo la oran kara waa “naag diric ah”. Haweenka Soomaaliyeed barkood waxay u kasban kari waayeen darajada dumarnimada waa mawduuc ballaaran oo ka baxsan hadafka iyo bartilmaameedka maqaalkaan. Waxaase dhici karta inaan si finfiniin ah,waxyaalaha qaarkood aan qalinka afkiisa ugu mudmudo…Si xanfaf leh, dhiigna uusan uga imaan.
Waabaa waxaa jiri jirey Jir la yiraahdo Soomaali(Somali body). Astaamaha guud iyo kuwa gaar ee jirnimadiisu way u dhammaayeen. Maskax talinaysa, qalbi aan marna seexan oo dhiigga u qaybiya xubnaha jirka oo dhan, calool aan ka daalin nafaqo u qaybinta xubnaha jirka, iyo sambab hawada jirkoo dhan wada gaarsiiya.
Muddo markii jirka Soomaaligu bashbash iyo barwaaqo ku noolaa, ayaa mar waxaa dhacay in unugyo ka soo haajirey xubin X(ekis) ay xoog ku soo galeen maskaxda. Halkaasna waxaa ku burburay isu dheelli-tirnaantii unugyada maskaxda. Waxaa bilawday caddaalad darro, xaqdarro, eex, xubinkiil (ama qaraabakiil!) iyo xubno kala-jecleysi. Calooshii nafaqada qaybin jirtey, baa nafaqadii ka dhigtay qayb ay u gudbiso xubin X iyo qayb ay iyadu kaydsato. Calooshii baruur iyo xayr aan loogu talagelin baa ka muuqday. Xubnihii kale oo laf iyo maqaar noqday, ayaa arkay xubin X oo murqo aysan lahaan jirin la soo baxday.
Xubnihii jirku badankood waa gadoodeen. Waxaa la goostay in maskaxda laga badbaadiyo unugyada ku dhexjira. Dagaal ayaa bilawday. Dagaalka waxaa lagu qaaday unugyada difaaca maskaxda ee xubin walba dhex joogay. Xubin waliba waxay soo dirtay unugyadeeda wax-iska-caabbinta(antibodies). Waxay giddigood u wada dhaqaaqeen – inay maskaxda jirka badbaadiyaan – si ay u soo noqdaan caddaaladdii, kala dambayntii iyo wada shaqayntii xubnaha jirku ka kooban yahay.
Markii madaxa la soo gaaray oo unugyadii laga saaray, baa maskaxdii si automatic ah oo isdifaac ka ah isu qafishay. Maskaxdu ma laha muruq iyo xoog ay isaga celiso xubnaha kale ee jirka. Sidii dhinacyada bur loo gala dhacayey, oo xididdada dhiiga u gudbiya looga jarayay, oo wax-iska-caabbinteedii loo sii wiiqayay, ayay COMA gashay – mase dhiman.
Hawlaheedii oo dhammi hal mar bay istaageen. Ayaan darradaas waxaa ka dhashay in xubnihii jirku ay isku soo jeestaan oo ay siday isu xigaan isu xasuuqaan, illaa ay xididdadii iyo seedihii isu wada hayey badankood ay jarjarmeen, lafahiina ay noqdeen kuwa dildilaacay ama burburay, qaarkoodna dhuuxii oo ceeriin lagala baxay. (Jirkii baa isku dhex raftay!!!).
Weli adduunka luguma hayo qolo sideennoo kale 17+ sano iska soo taagan iyagoo bilaa maskax ah. Geedadaygnimo, bahalnimo, qalafsanaan, indhaadayg, bartiyaqaannimo, aqoonla’aan, xishood la’aan, xaasidnimo, xoolajecli, iyo mooryaannimo ka dhalatay sunta virus Q(ga) ayaa noo suurageliyay inaan qaadno koobka maarta ee wax-iskuma-falnimada.
Virus Q(gu) wuxuu kaloo noo sahlay in jirka Soomaaligu uu sameeyo tadawur ama taqyiir (isbaddal) korriimo oo aan dabiici ahayn oo dibusocod ah (Backward Metamorphosis). Taqyiirka caadiga ahi waa kan cayayaanka (insects) jirkoodu is badbadalo inta ay koreyaan. Tusaale ahaan, Ballanbaalista(butterfly) quruxda badani waxay markeedii hore ahayd amaba kasoo xuubsiibatay diirdiirta(caterpillar). Sunta virus(ku) waxay sababtay in carruurnimada jirka Soomaaligu ay noqoto sidii balanbaalis oo kale , markuu soo korana uu noqdo diirdiir oo kale.
Xubnihii baa ka kaaftoomay wax maskax la yiraahdo oo bilaabay inay ku shaqeeyaan qariiso (instinct) keliya. Waxay ka nabadgaleen kadeedka iyo imtixaanka Fakaridda, Garashada iyo Dareemidda. Xubin waliba xor bay noqotay. Mid tiraahda “innagaa ismaamulayna tan iyo inta maskaxdu ka soo kacayso koomaha” (tus.Puntland), iyo mid tiraahda “Isma sheegano” (tus. Somaliland), oo weli xusuusan wixii ay ku dhigeen xubnaha kale ee jirka!!! – Halkaan laba arrimood ayaa xusid mudan:Waa mare, Somaliland waxay tiri,”annagu kama tirsanin jirka Soomaaliga (waan goosannay!) oo waxaa xad inoo ah haartii uu reebay xarigga gumaystayaashu(Ingiriis & Talyaani) ay xubnaha jirka Soomaaliga ku kala guntadeen. Xubini sideedaba iskeed jir (body) ugama go’ikarto. Waa in awood jirka ka baxsan (tus.Takhtar, bahal, mooryaan, iwm.) ay gooyaan. Waa dhici kartaa in jirku xubin iska gooyo. Jir xubin la’ (sida, gacan, lug, iwm) waa noolaan karaa, laakiin xubin laga gooyay jir keligeed ma noolaan karto.Tan labaad waa magaca ay la bexeen oo ah Republic of Somaliland – markii la tarjumo waxay noqonaysaa –Jamhuuriyadda Dhulka Soomaalida. Haddaba waxaa isweydiin leh, dhulka intiisa kale ma habar kuulay baa iska leh? Xataa haddii ay la bixi lahaayeen “Republic of North Somalia” (sida north korea. iwm) , macquul bay ila noqon lahayd. Iyo kuwo xubno kale dhex galay oo tuubooyin ku xirtay oo is yiri “isasii baanta inta maskaxdu suuxsan tahay”(tus.Gobolada dhexe & koofureed).Taas waxaa ka sii daran, in xubnihii jirku bilaabeen inay hadlaan iyagoo weli nool.…(Quraanka ayaa naloogu sheegay in Aakhira xubnuhu hadli doonaan!!!).
Haddaan sarbeeb ahaan wax u eego, waxaad mooddaa in munaasabadaha Walqalka, in ilmaha Soomaalida laga saro(jeexo) hadba xubinta uu ku abtirsado – sida garab, jilib ama jeego. Keddibna waxaa dhiigga looga nadiifiyaa oo looga dhayaa dhacaanka virus Q ee geedka dhunkaasha. Isla marka dhacaanku gaaro xididdada dhiigga, ayuu durbadiiba madaxa u dhaqaaqaa. Halkaasoo xididdada maskaxda dhiigga siiya, giddigood marka laga reebo kan ka yimid xubinta laga saray ay wada xirmaan. Ilmuhu xaaladdaas ayuu ku koraya, isagoo isu haysta inuu xubin yahay. Dhacaanku wuxuu kaloo saameeyaa aragga indhaha. Sida dibiyada lugu cayaaro dalka Spain u arkaan midabka guduudan(red colour) oo keliya, ayaa indhahaanina u arkaan ifka yare e ka soo baxaya xubinta ilmaha laga saray oo keliya.
Intaan la qaangaarin, indhuhu weli si fiican uguma muuqdaan sumaduhu – Keddib, ayaa sarniinku si fiican oo qeexan usoo muuqdaa, jirka intiisa kalena ay hummaag noqotaa.
Laba unug(qof) oo noocaas ahi markay kulmaan – signalka ay labadooda maskaxood kala helayaan waa “xubno kulmay”. Haddii labadaas unug ay isku xubin ka ifaan, waa lays fahmayaa oo dhibi dhicimayso. Haddiise ay kala xubno noqdaan, mid waliba difaac iyo weerar laba weji leh bay u diyaargaroobaysaa. Haddii labada unug ay dalka gudihiisa ku sugan yihiin waa istaag iyo orod ku dirir. Haddiise ay qurbaha joogaan waa fadhi ku dirir. Waa unugyo cajaa’ib ahoo si xad dhaaf ah u ciseeya ugana dambeeya unugyada kale ee ajaanibka. Laga yaabee iney taasi ka dhalatay isliididdooda (inferiority complex), ay is leeyihiin waa laydinka burji, barako iyo iftiin badan yahay.Kuwaani markay is dhugtaan, kiiba bar yaroo ifeysa baa kan kale uga muuqata (tusaale:suxulyahan la kulmay suulyahan iwm.). Marnaba isuma arki karaan laba unug(qof) oo Soomaali ah. Markayse ajnabiga dhugtaan, waxaa u muuqda unugyo dhammaystiran oo wada ifaya oo burji leh.(tusaale:unug (qof) Ingiriis, Talyaani, Sucuudi, Ruush, Shiineys, Keenyaati ah. iwm). Haddii unugga ajnabi uu yahay reer galbeed, wuxuu kuwaan ku dhaliyaa qablan iyo qiiro ku salaysan “Gaal facaa miyaa!!!” ama “Ilaahow gaal hanoo waayin, gaalna hanaga dhigin.”. Haddiise uu unuggaasi yahay Carab, waxaa ka dhasha burur iyo maashaa’allaah ku salaysan “Carabtu iyadaa diinta nooga sokeysa!!!”.
Tu kalena waxay tahay, qolooyinka carruurtooda ula baxay magacyo Kitaabiya. Qaar badanina iyagaa magacyadii iska baddalay.(Wasalat alfikrah!!!!!!).
Iftiinka faraha badan ee jirarka ajnabiga ah ka soo baxa, aad ayuu u dhibaa indhaha unugyadaan xubinta keliya ka ifa. Taasina waxay dhalisaa inay ajnabiga (nooc kasta ha ahaadee) hortiisa ku biciriirsadaan!! Had iyo jeer ,waxaad maqlaysaa unug hebel ama xubin hebel qole hebel baa hoggaanka u haysa! Waxaynu nahay ummad lugu soo koriyay virus Q; waxaynu nahay ummad kala sarreysa oo isliidda; waxaynu nahay ummad aan weli iska ridin heeryadii shisheeyaha; waxaynu nahay ummad diinta ay sheeganayso in yar ka taqaan; waxaynu nahay ummad aan weli fahmin qiimaha qofka iyo noloshiisa.
Maraykan,Talyaani, Masar, Sucuudi,Iiraan, Ethiopia,Eritrea iyo Yemen baa isbaarooyin (jidgoosyo) u dhigtay nimankii Soomaalida.Waxay la tahay in qolooyinkaani ay dantooda iyo maslaxaddooda wadaan.Qolooyinkaas waxaa ugu daran Talyaaniga. Waa adag tahay si looga lug baxo. Horay bay u soo gumaysteen Soomaalida oo si fican bay u yaqaanaan rooxaanta unugyada Soomaalidu ku shaqayso.
Si kastoo laysaga xoreeyay, weli wuxuu noo hayaa jacayl xad dhaaf ahoo indha la’ oo ku salaysan siyaasadda la yiraahdo Paternalism (qof ama dad, sidii inaad aabbe(waarid) u tahay oo kale looga walwalo oo baahidiisa/dooda oo dhan la haqabtiro, iyadoo aan la siin wax xuquuq ama masuuliyad ah.). Waagii gumaysiga ayuu fahmay in Soomaalidu, si kastay dad is leh u yihiin,aysan lahayn maskax ama siyaasad midaysan. Si Talyaanigu u jebiyo xooggii Leegada(SYL) ayuu nin la oran jirey Vincenzo Calzia, oo markaas hawl ka hayey Eritrea, Mogadishu u soo badalay. Barnaamijka ninkaani wuxuu ahaa – Maalgelinta iyo dhiirrigelinta abuuritaanka ururro lid ku ah Leegada; isku deyid in hawlwadeennada Leegada la kala qayb qaybiyo; is hortaagid faafinta Far Soomaaliga (fartii uu allifay Cismaan Y. Keenadiid-Allaha u naxariistee -Intii u dhexeysay 1920 -1922), maadaama ay Leegadu isticmaalaysay;iwm. Dadka qaar baa fartaas u yiqiinay Cusmaaniya, iyagoo Allifaha ugu magac daray. Talyaanigu wuxuu ku guulaystay inuu dad badan ka dhaadhiciyo in fartaasi ay tahay far xubneed/qabiil (tribal script) lugu doonayo in xubnaha kale ee jirka Soomaaliga loogu itaal sheegto. Xataa Ingiriisku ma rabin in fartaas la qaato. Niman badan oo Soomaaliya baa u ololaynayay in far Laatiinka la qaato. Cismaan oo nimankaas ka hadlaya wuxuu yiri:-
Laqdabo nooma hoosayso iyo lab iyo ceebaale
Lahan keeni mayniyo wixii lur ina gaarsiine
Lillaahaan kaga xoojinnaa luqada teena ahe
Ninba wixii ku laabudani waa inay ka laacaane
Amar nagu luggooyo ah kufrina lagu libaynayo
Oo nagu lid ah bay wadaan nimanka ‘Laatiine’
Leelleel waxaa qaba ninkii diinka laayaca e
Ma liibaano ruux gaalnimo laabta ku hayaaye
Laasima Shareecada rag naga leexday baa jira e …
Keddib samankii kacaanka ayaa far Laatiinka la qaatay, iyadoo dadka badankiis lugu qanciyay inaan far Soomaaliga lugu gaari karin aqoon, horumar iyo ilbaxnimo.
Bal immisa dal baa adduunka jira oo aan Laatiinka isticmaalin oo horumarsanna!!Tusaale ahaan,Shiineyska, Hindiga, Iiraan, iwm. Xataa dalka Ethiopia ee aan deriska nahay far u gaar ah ayuu leeyahay.
Calzia wuxuu ku guulaystay inuu abuuro ururro, kedibna uu ku mideeyey magaca ah “Conferenza della Somalia”. Xataa waagii kacaanka ee hantiwadaagga la ahaa, Talyaanigu nagama uusan lug bixin, oo rag ka tirsan xisbiyada hantiwadaagga iyo kan shuuciyadda ee Talyaaniga ayaa wakiillo uga ahaa Somaaliya. Sidoo kale, laga soo bilaabo bilowgii burburka qaranka Soomaalida illaa hadda waa nugu dhexjiraa. Hadba unuggii ama unugyadii uu is leeyahay waa la hagi karaa ayuu la soo xiriiraa. Intaas waxaad maqlaysaa jid bacaad ama guri geed ayuu Talyaanigu joogaa. Markay ku wareereen nimanka Soomaalida ee rooxaanta qaba ayey ka fakareen hadda in xagga dumarka laga soo maro oo la abaabulo. Waxaana ugu dambaystii timid wasiirad –ku-xigeenka arrimaha dibedda ee Talyaaniga Marwo Patrizia Sentinelli. Nasiib wanaag kuma aysan guulaysan arrintaas. Talyaanigu maahan mid sahal ku haraya, oo isagaa EU wakiil uga ah arrimaha Soomaaliya.
Talyaanigu wuxuu aaminsan yahay inaanaan marnaba ka maarmi Karin. Illaa xadna waaba runtiis, maadaama unuugyada Soomaalidu ay xubno isu haystaan.Wixii Soomaaliya ka dhaca ama ku saabsan oo dhan (dad , duunyo & dalba) isagaa laga wareystaa oo khabiir ku ah.
Mar horuu soo fahmay in unugga Soomaaliyeed uusan wax ka baxsan xubinta uu ku abtirsado garan Karin, iyo in unugyadu aysan marna wax meel isla dhigi karin:-
Matalan;Haddii unugyo ku abtirsada reer Lugyahan ay shir isugu yimaadaan, waxay u badan tahay inaan shirkaasi waxba ka soo bixin, sababtoo ah: Reer Jilibyahan amar kama qaataan reer Bowdoyahan, iskoodna go’aan uma gaari karaan, sababtoo ah waxay sii kala yihiin reer Kubyahan oo u kala baxa Lafdheeryahan (laba bahood), bah Seedyahan,iyo bah Canqowyahan(laba bah ah). Intuna waxay u sii kala baxaan reer Cagyahan oo u sii kala baxa Ciribyahan, bah Raysmagaadho, Suulyahan iyo Farayahan. Bah farayahan afar bay u kala baxaan, afartuna tan ugu yar bay liidaan, oo waxay ku magacaabaan bah Faryaro, laftigooduna waxay isu kala saaraan bah Hilibyahan(oo Laandheere ah) iyo bah Ciddiyahan.
Markaan dhexdooda u soo noqdo, waxaad arkaysaa in sidey xubnuhu u kala waawayn yihiin ay u kala faanaan ama isu yasaan. Xataa xubnaha qaarkood hawlaha ama meheradaha ay qabtaan ayaa magac looga dhigay.Tusaale: Midgaan, Tumaal, Yibir iwm.
In magacyadaani aysan ahayn kuwa qabiil, waxaa lugu garan karaa…Magacyada qabiiladu naxwe ahaan,waa magacyo gaar ah (proper names) oo wadar ama jamac(plural) ma yeeshaan, taasoo muujinaysa inay yihiin magacyo xirfadeed:-
Nin Daarood ah Niman Daarood ah (ma jiraan Daroodyo ama Daaroodyaal)
,, Hawiye ah Niman Hawiye ah
,, Isaaq ah Niman Isaaq ah
Nin Midgaan ah Niman Midgo ah (sida takhtar – takhtarro ama takhaatiir)
,, Tumaal ah Niman Tumaallo ah
,, Yibir ah Niman Yibro ah
Arrintoo kooban, geeljiraha Soomaaliyeed ee isku darsaday geesinimada, laandheernimada iyo xirfad-aqoon-la’aanta , ma uu jecla inuu la xidido amaba agtiisa lugu arko, ruuxa kabaha u tolay ama waranka uu bahallada isaga dhacsho u tumay!!!
Ummadaha adduunka badankood way sharfaan oo jecel yihiin xirfadaha iyo meheradaha oo xataa carruurtay ula baxaan. Matalan,dalalka Jarmalka iyo Iswiiska waxay carruurtooda ula baxaan magacyo ay ka mid yihiin “Schumacher”(Kabatole). Magacyada Ingiriisku la baxo, waxaa ka mid ah “Smith” oo macnihiisu yahay “Birtume ama Tumaal” .
Tan iyo wixii ka dambeeyey markii jrka Soomaaligu isku dhex raftay, waxaa nimanka Soomaaliyeed hadba qabanayay fool beenaad. Dhawr iyo toban jeer oo hore ayaa isbitaallo dibedda ah la jiifiyey ( lugu shirey!), waxna kama soo bixin. Isbitaalkii Carta ayay cunug (dawlad) fadhiid noqday ku dhaleen.Isagiina markuu socon kari waayay oo waaridkiis iyo qaraabadiis dayriyeen oo uu cunno iyo cabid waayay buu macaluulay, keddibna dugaag baa cunay.
Markii u dambaysay oo ay keenya laba sano ku soo foolanayeen, ayay dhaleen cunug dhicis ah (premature baby)!!! Waayadii hore, dhicisku rajo ma lahaan jirin oo inta badan waa dhiman jirey. Nin Soomaaliyeed oo beri loo soo sheegay in naagtiisii dhicisay, baa laga hayaa,”Awal baan waalnaa oo weel foorara wax ku shubtay!”.
Ma arki…maqli…taaban…dhedhemin…urin karaan macnaha maskaxda. Xataa waa ka daran yihiin rahii ceelka ku jiray ee halka xiddig keliya cirka ku arkayay. Si kastoo loogu sheego in cirku xiddigo badan yahay waa hal bacad lugu lisay! Illaa dib laysugu xirxiro xididdo-gudbiyeyaasha (Neurotransmitters) maskaxda ama (the messengers of the brain) oo maskaxdu dib u hawl gasho, markaas bay ogaanayaan maqaamkooda iyo awooddooda. Hadda maskaxdu Kooma ayay ku jirtaa,oo hadday reer Lugyahan socod damcaan, waxaa dhici kara in reer Xagalyahan ay Isbaaro u dhigato!
Waxaa jira dabaqad cusub oo u badan qurbaha, oo markay wax barteen u xuubsiibtay aqoonta laftigeedii oo noqday ‘Aqoonyahanno’. Ma mooddaa magac xubin(qabiil)? Sida Jilibyahan. Sideedaba, aqoonta ma la yeeshaa mise waa la noqdaa? Xataa haddii arrintu ka dhalatay ereybixin khalad loo bixiyay, waxaa cajiib ah, sheegashada, indho-adaygga ku salaysan oo ay la soo taagan yihiin. “Haddaanu nahay Aqoonyahannada” iyo wax la mid ah.
Unug ay usugu darsantay Virus Q iyo rooxaan iyo waxbarasho jaamacadeed, maxaa ka soo bixi kara? Seeflaboodnimo ku salaysan qiiro xubinyahanimo. Ereyga Seeflaboodka kama wado siday u yaqaanaan reer galbeedku, ee waxaan ula jeeda unug ay isugu darsantay xamaasad, aragti gaabni iyo hubsiimo la’aan. Nin reer miyi ah baa beri hore saddex su’aalood la weydiiyay: ‘Inta dhimatay iyo inta nool yaa badan?’ suuye, ‘haddii reer magaalka lugu daro, inta dhimataa badan’. ’Hodanka iyo saboolka kuwee badan?’ suuye, ‘Haddii lo’lay lugu daro saboolkaa badan.’. ‘Muslinka iyo gaalada kee badan?’ suuye, ‘Haddii naagaha lugu daro, gaaladaa badan.’. Aniguna mid afraad baan isweydiiyay oo isu jawaabay. ‘Mooryaanta iyo qurbajoogga kuwee badan?’ saanne, ‘Haddii Seeflaboodka lugu daro, qurbajooggaa badan’.
Qolooyinkaan aqoonta noqday ee qurbajoogga u badan,waxay kaloo la soo baxeen soo jeedinta talooyin aan dhammaanayn oo ku saabsan sida ugu wanaagsan ee Guriga(dawlad) Soomaalida loo dhisi karo. Giddigood fuundiyaal bay noqdeen. Aasaaskii, shub mise bulukeeti, intuu dabaq noqon lahaa iyo dhankii loo jeedin lahaa baa laysku haystaa!!! Wax walba in la wada sameeyo baa la rabaa! Guriga waa la idiin dhisayaaye, kaalayoo hadhow ka dhex shaqeeya, lagama karo. Mise arrintu aragti gaabni bay la xiriirtaa, oo guri dhiska (dawlad dhiska) wax dhaafsiisan ma arki karaan!
Alla maxaan akhriyay maqaallo ay soo qoreen niman wax bartay oo leh aragti xubin-yahanimo. Haddaad aqoonta ay soo gudbinayaan oo keliya ka miiratid, cilmi farabadan ayaad ka heleysaa. Qaar baa iyagoo raba inay soo bandhigaan aragti xubneed ama qiil ugu sameeyaan jacayl ama nacayb xubneed/unuggeed, waxay wax ka soo xigtaan diinta Islaamka, gaar ahaan, Siiradii nebi Maxamed scw. Iyo Saxaabadii; qaar kale waxay wax ka soo xigtaan sooyaalka adduunka; qaarna waxay isku dayaan inay af Ingiriis wax ku soo qoraan, iyagoo marmar ku lifaaqaya buugag la tixraaco (reference books). Maqal ku salaysan aragtii reer Jeegalaqaf-yahan, iska daa reer dhabaryahane, xataa wuxuusan gaarayn reer Garabyahan. Xididdadii iyo seedihii isku hayay xubnaha jirka Soomaaliga, ayaa u qaybsamay kuwa tawafay, liciifay, jilcay ama dammaadsan!! Badankood nimanka Soomaalida waxaa halhays u noqday orahyo ay ka mid yihiin; ‘Looma dhamma!’; jirka Soomaaliga meel ka baxsan ha lagu shiro!’; hebel nama matalo!’; Suxulyahan kuma hadli karaan afka reer Gacanyahan!’ iwm.
Nidaamyo iyo arrimo kala duwan baa Soomaalidu soo aragtay:-Nidaamkii Dimoqraadiyadda iyo kii Hantigoosadka oo virus Q lugu iidaamay; Hantiwadaagga iyo Shuuciyadda oo virus Q hoggaanga u hayo;ciidamadii qalabka sidey oo laga dhigay dad mashiinno ah(robots) oo ku
Shaqeeya korontada virus Q(ga);
“…Bal in meesha la doorsan yahay waxaa daliilkeed ah
Kolkaasay warmaha kula didaan diidi mahayaane…” (Cali Dhuux)
jabhado isku deyey inay la diriraan xukunkii Ina Siyaad Barre (Allaha u naxariistee), iyagoo laftigoodu adeegsanayeen virus Q(ga); iyo ugu dambaystii Fawdo, burbur, kala yaac, Dawlad la’aan, rag la’aan, dumar la’aan, carruur la’aan, mabda’ la’aan, Diin yaraan, marjaciyo la’aan, dhaqan la’aan, iyo Sharaf la’aan.
Waa iga su’aale, Marjaciyaddii jirka Soomaaliga miyaa luntay mise weligeedba ma aanan yeelan? Haddaad u fiirsatid bulshooyinka adduunka, waxaad arkaysaa umaaddo isku dhafan (complex) oo ku kala dhex dhex jira weegaarrada adeegga bulshooyinka, sida dhaqaalaha, waxbarashada,caafimaadka, warfaafinta,iyo siyaasadda.
Arki maysid bulsho la leeyahay unugyadeedu(nimankeedu) waxay u badan yihiin weegaar hebel. Markaad u fiirsatid nimanka Soomaalida ee rooxaanta ku shaqeeya, waxaad arkaysaa marxalad kastoo la soo maray inay badankood isku meel u yaacayeen.(dameeri dhaan….!!!)
Ka soo bilaw waagii gobanimada la qaatay illaa 69kii waxaa suuq lahaa xildhibaan (deputati); samankii kacaanka sarkaal/wakiil xisbi baa loo batay – waxaa kaloo isla jeerkaas lugu daatay Janaale; jabhad baa ku xigay; waxaa ka sii dhashay qabqable, wax-iskuma-fale iyo indheergarad aan meel dhow wax ka arag. Hadda waxaa lugu jiraa xilligii amaba kalkii wadaadka.
Waddaadada samankaan jooga waxay isku darsadeen tafaraaruq iyo waxtar aad u fara badan. Qolooyinkii hore waxay u badnaayeen kuwa leh aragtiyo midaysan.
Waxaa wadaaddada laga kororsaday aqoon fara badan oo dinnteenna ku saabsan. Dacwadda iyo tabliiqa iyo muxaadarooyinka ay ka sameeyeen dalka gudihiisa iyo qurbahaba waa arrimo an qofna inkiri karin. 95% haweenka Soomaalida ee dalkii ku sugan xijaab iyo/ama niqaab bay wada xirteen. Sida la yiri 15% bay is asturiddu dhab ka tahay oo aaminsan in xijaabku yahay wax diintu nafarayso. Inta kale waxay isugu jiraan kuwo Moodo cusub mooday; kuwo faduusha nimanka ka nabad gala isleh oo markay magaalada ka soo noqdaan meel isaga tuura; kuwo is leh bulshada haka takoormina; iyo kuwo ku dhex dhuumanaya niqaabka oo loo yaqaan “Hayga baqin!” ama “Hooyo iga qari!”.
Inkastoo wadaaddada dhabta ahi aad u dadaaleen welina dadaalayaan, waxaad arkaysaa in diin jacaylkii iyo dulmi jacaylkii unugyada(nimanka) Soomaalidu ay si xawli ah meel sare u wada marayaan! Tu kalena waxay tahay xawliga muxaadarooyinka iyo duruusta paltalk(gu) oo sababay in macalimiintu ay ka farabataan ardayda! Waxaa kaloo iyada xusid mudan, in arrimaha ama mawduucyada looga hadlo muxaadarooyinka aan loo kala soocin dhegeysta-yaasha (carruurta, haweenka iyo nimankaba). Waxaad maqlaysaa amuuro haweenka u gaar ah ama nimanka u gaar ah oo xasaasi ah oo la wada dhegaysanayo! Haween nuxnux leh, niman ilka caddaynaya iyo carruur qaylinaysa baa isku meel wax loogu sheegaa. Beri baa waxaa la yiri nin wadaad ah baa wuxuu arkay nin kaloo uu garanayay oo haween dhex fadhiya oo inta macawistu si ka noqotay cawradiisu muuqato. Intuu ku naxay oo cararay buu u tegay xertiisii oo ku yiri,”Waxba hays asturina…wax Alla wixii aynu soo qarinaynay tan iyo nabi Aadan, hebel baa maanta haweenkii tusay!!!”. Waxaa dhacda mar mar in wadaad ka hadlo arrimaha barbaarta iyo xumaanta ay sameeyaan, iyagoo meesha fadhiya.Taasoo keeni karta in kuwa khabardaarka ah ay shiikha laftigiisa waxyaalo aysan horey u ogayn ka bartaan!!
Tabliiqa wadaaddadu xaggee buu diiradda saaray? Ma wadaaddadaan marnaba si dhab ah uga hadlin dulmiga iyo isku rafashada unugyada Soomaalida oo ka faaruqi waayay baabul Dahaara? Mise unuggga Soomaaliga ah ee rooxaanta qaba ayaan waxba la fahansiin karin? Malla hayaa wadaad ama wadaaddo fahmay in unug ay isugu darsantay rooxaan iyo virus Q, uusan wada fahmi karin Diinta? Mise arrintu, waa un ha lagu shubo! Oo rooxaantu dhan walbay joogtaa! Waxaa xusid mudan, sida Diinta loogu daatay; Haweenka badankood waa xijaaban yihiin, masaajidyadu had iyo jeer waa cammiran yihiin, muxaadarooyinka looma kala haro, taraawiixda, soonka iyo salaadda…Sunnaha farahabadan, khayrka, ajarka iyo xasanaadka loo wada xiimayo… Waa arrimo runtii farxad weyn ku gelinaya. Markaadse fiirisid sida xaalkeennu yahay ayaa dareen ku geleyaa. Waxaa kuu soo baxaya laba arrimood midkood:- In munaafaqii nugu batay iyo/ama in la buko oo daawo loo baahan yahay. Maadaama xubnihii jirka Soomaaligu kala gogo’een oo aysan jirin maskaxi, arrinta luguma fasiri karo munaafaqnimo.
Unuggii kaamil ah oo fayow baa diinta Islaamka si kaamil ah u wada fahmi kara oo ku dhaqmi kara. Islaamku maahan Cibaadaysi keliya, ee waa Hab-nololeed(way of life) dhammaystiran oo loogu talagalay unug dhammaystiran(fayow). Unuggii aan fayoobeen, sida kan Soomaaliga ma uu wada fahmi karo saddexda weegaar ee Islaamka: Caqiidada, Cibaadaadka iyo Mucaamilaadka(Unugga iyo qayrkiis amaba ‘wixii unugyadu kala mudan yihiin’). Unugga Soomaaligu wuxuu badi fahmi karaa oo ku dhaqmi karaa labada hore oo keliya. 99% waa la wada cibaadaysanayaa, xaaraanta (tus, khamrada, khaansiirka, iwm.) looma dhowaado, laakiin unug aydaan isku xubin ahayn(Qayrkaa) shaqo kuma lihid. Wax walbaad ku samayn kartaa…Handadaad, xasid, dil, dhac, kufsasho, bililiqaysi, iwm. “Geeridu nimaadan aqoon( isku xubin ahayn) iyo geeljireey ku fiican tahay (si hadhow geeliisa loo bililiqaysto!) bay Soomaalidu tiraahdaa. Bal xaggee lugu arkay geeri fiican??!! (Digniin:Ulakas baan uga leexday ulajeedddadii dhabta ahayd ee maahmaahda!). Mar haddii maskaxdii unuggu aysan fayoobeen, oo aysan kaamil isu arag, aqoon kastoo la yeesho ama wadaad kastoo la noqdo, waa hal bacad lugu lisay. Diinta iyo aqoontaba aragti xubneed baa lugu eegayaa. Bal xusuuso, akhristow, maahmaahdii ahayd, fiqi bahdii(xubintii) kama janno tago. Ummad badi wada cibaadaysanaysa oo haddana badi is wada cunaysa!!!
Xilli kastoo la soo marayba, dhib baa ka haysatay haweenka Soomaaliyeed. Dacwadahoodu weli waa socdaan. Matalan, samanki kacaanka, haweeneydii ninkeedu u diido inay aaddo golaha hanuuninta dadweynaha (orientation center(ka), waxay oran jirtay,”sarkaal hebel ama wakiil xisbi hebel baan kugu dacweynayaa.” Amaba toos bay u aadi jirtay. Haddana tii (qurbaha ku sugan) oo ninkeedu u diido inay aaddo muxaadaro ama ka dhegeysato paltalk(ga), Iimaam ama wadaad baa khadka soo gelaya! Waxaa kaloo jira qaar, markay dalkii joogeen u ekaa nooca loo yaqaan “Jabane kabto” oo kolkay qurbaha yimaadeen u xuub siibtay “kabane jebiso” oo niman badan ku riday buufis, fadqalalow iyo kalaguur (separation). Inay sida ka noqotay, ama ay niman ka aargoosi ka tahay, ama wax kale istuseen, ama latusay, Illaah baa garan kara! Dhanka kale markaan eego, waxaad arkaysaa in badan oo weli dalkii ku sugan oo isku haya hawlahoodii xaasnimo iyo hooyonimo iyo weliba shaqooyinkii ay dayaceen nimanka rooxaanta qaba. Haween badan baad dalkii ku arkaysaa, iyagoo ilmo xambaarsan suuqyada yaanyo ama xataa qaad ku iibinaya, nimankiina ay u qaybsameen kuwo qayilaya, ama qalaadaya, ama qoryo haysta ama qablamaya ama qurbe sugeyaal ah. Sidoo kale, nimanka qurbaha ku nool ee buufiska ka badbaaday, Eebbe ka sokow, xaasaskooda baa mahadda iska leh!!!
Joker(ka) noo harsanaa ee laysku badbaadin karay wuxuu ahaa Diinta, isagiina si khaldan oo aqoon yari, siyaasad xumi iyo virus Q u sabab yihiin baa loo isticmaalay.
Maadaama xubnaha kala yaacaya ay markii horeba ka tirsanaayeen jir muslin ah, ayay unuggyo ka tirsan xubnaha qaarkood la noqotay gariisa ahaan (by instinct); ’in jirka Soomaaliga dib laysugu soo cesho, iyadoo la adeegsanayo shareecada Islaamka’.
Halkii ay isku hawlin lahaayeen badbaadinta iyo nafaqaynta Dhiciska iyo daaweynta iyo soo kicinta Maskaxda suuxsan, ayay iyagoo si xawli ah u socda xoog u dhex galeen xubnihii jirka qaarkood. Sidoo kale, halkii ay la xiriiri ama kaashan lahaayeen unugyada kale
ee xubnaha jirka, ee laftigoodu rabay shareecada Islaamka – bay la noqotay inay iyaga keliya wataan islaamkii saafiga ama runta ahaa (pure or real Islam!)
Qaylo dhaan iyo waa waray baa bilaabatay. “Hanalaga soo gaaro unugyadaan… waxaan isaga difaacno ma haysanno…Maskaxdii naga dhicin lahayd weli waa suuxsan tahay…iwm.
Si dhiciska loo badbaadiyo, xubnahana looga cesho soogalootiga(antigens), ayaa adduun- weynuhu soo gurmaday. Haatan adduunku wuxuu goostay inuu jirkaan iska soo taagan ee 17(ka) sano bilaa maskaxda ah wax ka qabto. Waxaa xusid mudan in noo soo gurmadka adduunku ay unugyada jirka Soomaaliyeed ku dhalisay laba mawjadood oo kala aragti ah.
Qole qabta in soo galooti shisheeye (foreign antigens) oo cadow ahi ay jirka Soomaaliga xoog ku soo galeen; iyo qolo qabta in la helo cid naga xoog badan (waxay rabto ha ahaatee) oo xubnahaan isku dhex raftay dib isugu keenta. Qolada hore waxay leedahay, marnaba macquul maahan in cadow kuu gargaaro; qolada dambena, waxay la tahay in cadowga laftiisa laysku daaweeyo. Tusaale ahaan, si dadka jirrooyinka halista ah looga badbaadiyo, laftigooda ayaa lagu tallaalaa (vaccination); sidoo kale, haddii loo leexdo suugaan carruureedka Soomaalida, waxaa jira googaale xigmad weyn ku fadhiya oo carruurtu isku xujeeyaan. “Col ku dilay ciidan mood” – oo jawaabtiisu tahay “Qodaxda”. Reer miyigu , markii qodaxi muddo mid kalay isaga bixiyaan! Illeyn irbad iyo wax kala toona lama haystee. Nimankii ummadda neefta ku ceshay oo maarada loo waayay, baa la yiri, “ Na hoggaamiya oo Maskax(dawlad) noo foosha oo mooryaanta kale ee yaryar naqa qabta, idinkaa tab yaqaane!”. Arrinta cadowga soo galayna in badan baa ciidan u aragta.
Intaanan dhan kale u gudbin, waxaa xusid mudan dhawr arrimood oo bulshada badankeedu aysan si fiican u wada fahansanayn, oo ku saabsan garta ama xaalka dhexyaal kooxaha cusub ee asalraaca isku tilmaama iyo ahlu sunnah wal jamaaca; macnaha salaf saalixiin iyo khalaf as-saadiqiin; macnaha ay leeyihiin ereyada sunnah, mad-hab, fiqi, iwm. Ereyada samankaan badiba lawada hadal hayo waa Salafiya iyo Sunnah. Horta ma jirto madhab la yiraahdo Salafiya. Qolooyinka asal raaca ah ee diiddan tixraacidda fiqiga madaahibta (taqliid) ayaa la baxay Salafiyiin, iyagoo ka wada inay u dhuun daloolaan samankii Salaf saalixiinta oo ahaa muslimiintii labadii qarni ee ugu horreeyey ee Islaamka (Saxaabadii, Taabiciintii iyo Kuwii-sii-taabacay). Culimadii Islaamka ee timid qarniyadii 3aad iyo 4aad baa iyagana la yiraahdaa Khalaf as-saadiqiin. Ictiqaadkii iyo ijtihaadkii culimadaas ayaa la yiraahdaa madaahibta Ahlu sunnah wal jamaaca. Afarta ugu waaweyni waa Shaaficiya, Hanbaliya, Maalikiya iyo Xanafiya. Usuusha Islaamku waa labo (quraanka & sunnada), waxaase lugu kala aragti noqday fahamka(fiqiga) Usuusha oo noqday (Furuucda).
Habkii (method) ay culimadaasi Usuusha u fahmeen oo u fasireen si loogu dhaqmo ayaa mad-hab la yiraahdaa. Fahamka Usuushu(Quraanka & Sunnada Nebiga scw), iyo fasiriddooda iyo ama xukun ka soo saariddoodu aqoon farabadan oo ugu yaraan 15 maaddo lugu sheego bay u baahan tahay.Tusaale ahaan waxaa ka mid ah : Cilmu Luuqa (philology of language); Naxwe (syntax); Sarf (etymology); Ishtiqaaq (derivatives); Cilmul macaani (knowledge of semantics); Cilmul bayaan (knowledge of figures of speech); Cilmul balaaqa (knowledge of rhetoric); Cilmul qiraa’aat (knowledge of the art of pronunciation); Cilmul Cibaadaat (knowledge of the fundamentals of faith); Usuul fiqi (principles of islamic Jurisprudence); Cilmul xadiith (knowledge of axaadiith); iwm. Wadaaddada hadda jooga qaarkood baa yiraahda culuumta aan kor ku soo sheegay waa bidco oo kama soo aroorin (ma jirin) samankii Salafu Saalixiinka !!! Sidaas daraadeed, loomaba baahna!!!!
Fiqiga Waddamada Islaamka waa Ijtihaadkii iyo fahankii afarta A’imo.Tusaale ahaan: Aljeeriya, Morocco,Liibiya, Bahrain, Muritaanya, iwm waa Maaliki; Turkiya, Aasiyada dhexe, Pakistan, Bangladesh, Iraaq, Balkans(ka), iwm waa Xanafi; Sucuudi Caraabiya, Qatar, waqooyi bari Omaan, iyo Imaaraadka qaarkiis waa Xanbali; Soomaaliya, muslinka Ethiopia, Yemen, Indonesia, Malaysiya, muslinka Filibiin, iwm waa Shaafici.
Mad-hab kasta waxaa usuul u ah Quraanka iyo Sunnada. Usuushu maahan wax sidii Dastuur oo kale qodob qodob u qoran( article by article).
Shareecaduna waa xeerar iyo qawaaniin laga soo daliishaday Quraanka, Sunnada iyo weliba Ijmaaca iyo Qiyaasta culimada. Matalan, Succudiya oo Shareecada Islaamka ku dhaqanta haddii ay qof dembi galay ku xukunto 6 bilood oo xarig ah. Meelna kagama qorna Quraanka iyo Sunnadaba 6 bilood oo xarig ah. Waa qodob xeereed lagala soo baxay aayad quraan ah ama nus hadiith ah. Si xeer, sharci, go’aan ama Fatwo looga soo saaro Usuusha waxaa loo baahan yahay fiqi.
Dadaal aan yarayn iyo ijtihaad farabadan bay soo galeen culimadii hore ee Islaamka. Haddaba, haddii fiqiga la dhinac maro sidee dal ama dad loogu dhaqi karaa shareecada Islaamka? Markii la waydiiyo wadaaddada asal raaca ah , marjaciyaddooda ama fiqigooda ay shareecada Islaamka Soomaaliya ugu dabiqi doonaan, jawaab ku qancisa ka helimaysid.
Dhinac kale haddaan eego, sheegashada ay leeyihiin Quraankii iyo Sunnadii keliya baan haysanna, baa caamadu is tiraahdaa iyaga keliya baa saxsan amaba waaba firqatul najaat (kooxda badbaaday).Waxaad had iyo jeer qurbaha ku arkaysaa qolooyin aad u khushuucsan oo qaba in diintaba qurbaha lugu bartay. Diinta yaanba si fiican loogu dhaqmin, laakiin Soomaaliya bilaa Diin ma ahayn.
Qolooyinka aaminsan in Dahaarada qurbaha lugu bartay, baan waxaan ku xujeeyay bal inay ii soo helaan qof Soomaaliyeed oo reer Baadiye ah (tus.geeljire) oo aan aqoon ereyga “Istijo!” amaba intuu muraadaysto aan isagoo isnadiifin iska kaca!! Afarta wax ee ugu horreeya wax ka sheegga Islaanimadii Soomaaliya waa “Waa la digriyi jirey; mawliidkaa loo dabbaaldegi jirey; ahlu qubuurtaa la baryi jirey iyo Suufinimo!”. (Nin baa laga hayaa, ‘Maanaa suufiya mise dadkii baa salafiyoobay!!!’. Horaa waxaa isugu soo dhacay ‘Saalixiya & Qaadiriya’, samankii Daraawiishta, hadda oo lugu jiro samankii Maxkamadaha, ‘Salafiya & Suufiya’ baa si xun ceega isugu haya. Eebbow kuwii roon reerka u daa!). Keddib si loo badbaadiyo Unugyada Soomaalida, waxaa dalkii iyo qurbahaba ka bilawday muxaadarooyin iyo tabliiq ku salaysan Manhajyo ka soo arooray dhawr Shiikh oo (magacyadooda la yaqan) oo ka mid culimadii hore iyo kuwa samankaan. Wixii culimadaas ka aragti duwanna waxay geleyaan baabul Bidco iyo taqliid.Unug Soomaaliyeed ee rooxaan qaba, hadduu arrimaha qaarkood ka hadlo waa lugu soo boodayaa oo looma adkaysan karo. Markayse arkaan unugyo ajnabi oo Burji leh oo digrinaya (tus. dalka Suudaan, ama sunno afar afar rakcadood ah tukanaya ama tusbax kugu soo halgaadaya salaadda keddib (sida Turkiga) ama gacmo sii days ku tukanaya (sida Liibiya) hoos bay isaga hogtaan oo kuma dhacaan inay tabliiqiyaan ama wax u saxaan si kastay Carabiga u yaqaanaan.
Hadday qolada badbaadaysa isu arkaan, maxay laftigoodi u kala firiqsan yihiin? Oo manhajyadoodu u kala duwan yihiin? Waxaa jira Salafiya jihaadiya; Salafiya tazfiya; Salafiya siyaasiya, Salafiya jadiida(neo-salafism) iwm. Fikriyan waxaaba ila macquulsan qolada labaad oo qabta in marka hore qofka diintiisa si fiican loo baro, intaan lagula xisaabtamin oo aan la karbaashin! Waxaase dhacday, in markii la yiri, ‘war Ilaahay xaggiisa haloo noqdo oo dadka Usuusha – Quraanka & Sunnada – hala baro, inay wadaaddo u badan kitaabgaab, la noqotay inaan Fiqiba loo baahnayn!!! Waxaa kaloo xusid mudan magacyada kala duwan ee kooxahaani la baxeen ee la wada garanayo.Waxa alla wixii aragtidooda ka duwani waa bidco. Arrintoodu waa ‘Sida aan annagu u fahannay Usuusha oo keliya baa sax ah.’
Ereyada ugu hadalhayska badan qoloyinkaan, waxaa ka mid ah,’sooma aroorin, waa bidco, xadiis cad baan haystaa!, waa sunno! Iwm.’
Ereyga ‘Sunnah’ waxaa mar loo isticmaalaa qaybta labaad ee Usuusha Diinka.(tus. Quranka iyo Sunnada); mar kale, waxaa loo isticmaalaa wixii ‘aan faral’ ahayn sida salaadaha sunnada ah, waxaa kaloo loo isticmaalaa’sunooyinkii – (caadaat)kii nebi Maxamed – scw. Matalan siduu wax u cuni jirey, ama u seexan jirey ama u lebisan jirey iyo wax Alla wixii uu samayn jiray ee aan ka mid ahayn Shareecada. Qolooyinkaani markay muxaadareynayaan, ma kala saaraan macnaha Sunnada. Ma kala sheegaan in sunnada ay ka hadlayaan ay tahay mid “qawli, faacili ama taqriiri ah – verbal, actions and tacit approval” ama xataa ay tahay “Sunnah tashriiciya ama gayra tashriiciya – legal and non legal Sunnah.”
Intaas waxaad maqlaysa “Waa sunno!”. Oday Soomaaliyeed oo qurbaha jooga oo arrintaani ka bad badatay baa yiri baa la yiri: ”Kaalaya, horta ninkii faral la oran jirey ma Soomaaliya baan uga soo kacnay!?”
Iyadoo awalba bulshadu la rafanaysay buktada Virus Q(ga), ee rooxaanta ku shaqaysa, baa waxaa waayadaan dambe xagga Diinta naga soo galay arrimo muslinimadii unugga shaki gelinaya.
Badiba waa la wada xusuusan yahay amuurihii soo bilawday samankii kacaanka ee tartiib tartiibta u soo xoogaysanayay, illaa hadda ay soo gaareen heer aan loo babac dhigi karin. Dhallinyaradii iyo waaridyadii isku dhacay, keddib markii dhallinyaradu yiraahdeen, ‘Xalaal iskuma aydaan soo guursan,’ ama ‘waa inaad hadda diinta soo gashaan oo aad ashahaadataan.’. Aayadahii Kufaarta ku soo degay oo laysku soo dejiyay! Guryihii ama qoysaskii la dumiyay, keddib markii rag badan xaasaskoodi laga furay, iyadoo sabab looga dhigayey taarikul salaadnimo iwm. Ugu dambaystii, waxaa haddataan weli jira qolooyin qurbaha iyo dalkiiba ku sugan, oo haddaad neef usoo gawracdid aan hilibkiisa cunayn amaba aan salaad kula tukanaynin haddaysan iyagu Iimaam kuu ahayn, oo ay Islaanimada iyo Soomaalinimaduba idinka dhexeyso!!!!!!!!!!!
Waxaa keliya ee noo haray waa in nala daaweeyaa, weliba si khasab naxdin leh ah(enforced Shock therapy), oo qaliin nalagu sameeyaa, si xubnaha jirka Soomaaliga dib laysugu wada tolo. Markaasna ay wada shaqayntii jirku ay dib usoo noqoto. Niman badan baa ku dooda oo yiraahda ”war jirka Soomaaliga iyo xubnihiisa ha laysu daayo …iyagaa is fahmi doona e” iyo “ Uma baahnin takhaatiir (faragelin shisheeye).”. Bal adigu, Reer Jeegoyahan iyo Reer Ciribyahan ma kulmin kartaa,amaba ma ka dhaadhicin kartaa inay yihiin xubno hal jir ka wada tirsan oo isku DNA ah? Maskaxdii iyo dareemayaashii ay isku fahmi lahaayeen baan weli jirin!
Waxaa jirta in cudurka waalidu uu noocyo iyo heerar kala daran oo kala duwan leeyahay. Soomaaliduse waxay waalida u taqaan mid keliya. Kan qofka la xirxiro. Qofi waa ama waalan yahay ama waa miyirqabaa(fayow yahay). Wax ka dhexeeya lama yaqaan.Buufisku waa nooc ka mid ah waalida heerka hoose. Waxaa dhacda in qof caato ahi isu arka inuu buuran yahay, oo uu cunnada ka waantoobo illaa uu lafalafo noqdo. Markuu muraayad isku fiirshaba, cayilkiisa ayuu ka naxaa.Qofku waa isla caafimaad qabaa, cidna ka dhegeysan mayo inuu baan u baahan yahay. Sida keliya ee lugu daaweyn karo waa in si jujuub ah(khasab) ah isbitaal lugu jiifiyo. Cudurkaas waxaa la yiraahdaa Anorexia. Sidoo kale,waxaa jira mid qofku ku waasho cunno cunid oo la yiraahdo Bulimia. Waxaa kaloo dhacda in qofi ismoodo wuxuusan ahayn, sabab kasta ha lahaatee. Waxaa jiray nin ismooday inuu yahay xabbad masaggo ah. Nin wuxuu ahaa sidiisa kale caadi u ah oo fayow oo aadan wax yarna ka dareemayn. Dhibta keliya ee ninkaas haysay waxay ahayd Digaagga(Doorada) oo uusan arki karin oo uu ka baqayay inay kub siiyaan( cunaan!). Isbitaal baa la geeyey oo muddo dheer la daaweynayey oo laga dhaadhicinayey inuu qof yahay. Ugu dambaystii,markii imtixaankii laga qaaday uu ku gudbay oo la yiri waad bixi kartaa, buu inta dhaqaaqay haddana dib usoo noqday oo takhaatiirtii su’aal waydiiyay:
“Anigu hadda waan fahansanahay inaan qof ahay, laakiin digaagga ma loo sheegay inaanan masaggo ahayn !!!”. Isbitaalkii baa lugu ceshey.
Unug(qof) aan isu haysan inuu unug yahay, balse isu arka inuu yahay xubin ka mid jirkiisa (sida ninka xabbadda masagada ah ismooday), matalan Garabyahan, hadduu Diinta ama cilmi adduunyo wax ka barto, maxaa laga fili karaa?
Unugga(qofka) Soomaaligu burji ma leh, sababtoo ah wuxuu isu haystaa inuu xubin yahay, (tus. Cududyahan – bah Saddexsuulle, iwm.). Haddaba, ma lagu tilmaami karaa, mid kaamil ahoo wada leh astaamaha unugnimada(qofnimada)? Illaa yaraantiisi ayaa lagu soo ababinayay inuu yahay xubin. Waxa keliya ee maskaxdiisu fahmi karto, waa ka tirsanaanta iyo difaaca xubinta uu ka suntan yahay. Diin kastoo la barto ama aqoon kastoo la yeesho, waxay la mid tahay biyo lugu shubay dhul dalcad ahoo sibir(shamiito) ah. Badi waa ka wada dareerayaan. Xoogaaga qoyaanka ah ee soo harana, wuxuu ku eegayaa ama ku fasirayaa aragtii Xubinyahannimo. Waxaad arkaysaa ama maqlaysaa wadaad caalimmo ducaynaya oo leh, ‘Ilaahow jebi cadowgeenna ama gaalada’, isagoo ula jeeda reer hebelyahan. Ama waxbarte cilmi farabadan ku soo qubaystay oo ka hadlaya badbaadinta jirka Soomaaliga, isagoo ku eegaya aragtii xubneed (tus.Cagyahan – bah Rays magaadho!!!).
Aqoontu inta ay ku kooban tahay xubin keliya xigmad iyo garad toona ma yeelato. Unugga Soomaaligu weli ma uusan noqon mid isagu mas’uul ka ah falalkiisa oo qaan garay. Wax alla wixii xaggiisa ka yimaada, shar iyo khayrba waxaa ka mas’uul ah xubinta uu ku abtirsado.
Abtirisku (barashada iyo qaadsiinta virus Q(ka).), waa qaybta ugu muhiimsan uguna horreysa korinta iyo barbaarinta carruurta Soomaaliyeed. Ka tirsanaanta reer Geedyahan ama reer Bahalyahan ayaa hadhow ka xoog badata Diinta, Aqoonta, Akhlaaqda, Ilbaxnimada, iwm. Addunweynuhu, carruurtu markay dhashaan, waxay ka tallaalaan cudurada halista ah sida dabaysha (polio), innaguna lid ahaan (bilcaksi), mid halis ah oo maskaxda ilmaha dammaad joogta ah ku dhaliya (virus Q) ayaan qaadsiinnaa. Tallaalka waxaa laga sameeyaa soo galooti (antigen) – bacteria ama virus – sababa cudurka. Soo galooti(antigen) waa wax kastoo qalaad oo markay jirka soo galaan, jirku iska difaaco.
Ilmaha dhashay markii la Qaadsiiyo(lugu rido) virus Q(ga) wuxuu markay koraan, u sahlaa adeegsiga iyo ku kalsoonaanta qabyaaladda. Waa cudur halis ahoo lays qaadsiiyo. Waa cudur qofkii aan qabin, ay khasab ku noqonayso inuu hadba ka cararo meeshii lugu sheego ama qofkii qaba. Maadaama bulshadii oo dhammi wada qabto, haddee sabab loo kala cararaaba ma jirto! Meel laga wada waalan yahay haddaad miyir qabtid, wax falan baad noqonaysaa!!! Hadda waa dhici kartaa inaad maqashid qof buka oo leh, matalan, “barbar iiga durug, hargab ama TB baa igu dhacdee…Weli lama gaarin , in la yiraahdo, ”barbar iiga durug,Virus Q baan qabaaye.”
Iyadoo maskaxdii jirka Soomaaligu ay kooma ku jirto, isfahankii iyo wada shaqayntii xubnaha jirku ay mar hore istaagtay, oo xubno badani horey isugu soo rafteen (adigoo ah unug wax-iska-caabin(antibody), haddaad u gudubtid ama gashid xubin kale, waxaad noqonaysaa soo-galooti(antigen).) ayaa waxaad maqlaysaa ama arkaysaa unug-xubneedyo siyaasadda ka hordega oo si indho-adayg fooqal caqli ah oo aan horay loo soo arag uga hadlaya siyaasadda. Waxay yiraahdaan, “Marakan ma jiraan xubno is haysta ama isku rafanaya – Waxa yaalla waa arrin siyaasadeed oo ah sidii laysu fahansiin lahaa ama meel loosoo wada fariisin lahaa unugyada waxiskacaabinta(antibodies) iyo kuwa soogalootiga (antigens) ee jirka Soomaaliga.”. Unugyadaani, waxay ila tahay inay ku hamminayaan in unugyadooda haatan ku sugan ama ku dhex jira xubno aan degaan u ahayn – in sidooda loo daayo – sidaasna jirku dib isugu fahmo! Macquul ma tahay in unugyo ka tirsan reer Cududyahan ay ka taliyaan reer Kubyahan?!
Daawada jirku waxay ku jirtaa in marka hore la kala saaro unugyada waxiskacaabinta iyo kuwa soogalootiga…Jirkoo dhanna dib laysu qabadsiiyo…Maskaxdana lala tacaalo inta ay koomada ka soo kacayso, si dhiciskuna u badbaado oo uu burji u yeesho oo uu caafimaad ugu koro. Haddii kale, ama waa dhimanayaa ama isagoo rooxaan qaba ayuu korayaa!!!! Hadduu qaangaaro isagoo rooxaan qaba, Isku-dhex-rafashadii ayaa haddana kow laga soo bilaabayaa iyadoo nakhtiin ah.
Diinta Islaamku waxay shaqsigii jaahiliga ahaa ka xoreysay nidaamyo iyo dhaqammo hortaagnaa. Islaamku kor buu u qaaday karaamadii iyo sharaftii qofku lahaa. Qof walba oo qaangaar ah isagaa ka mas’uul ah falalkiisa (xumaan & samaanba) adduun iyo aakhiraba.
Haddii xataa walaalka uu wax dhaco ama uu cid dilo, adigu dembi kuma lihid.
Toban sano ayaa Talyaanigu na barayay sida loo qaangaaro (waagii AFIS). Keddibna bannaanka ayaa nalagu siidaayay.Waxaynu ahayn toban jir laga dhaadhiciyay amaba lugu yiri “waxaad tahay Qaangaar” oo dastuurkii iyo nidaamkii waayeelka(adults) farta laga saaray.
Keddibna annagoo 19 jir ah baa barbaartii noo kacday ay qoor sagaaro nuqu qabteen, oo layska furfuri waayay, maadaamaa qoortii iyo gacmihii isku kokeen – sidii wax qalal qaba. Markaad xaalkeenna sidaas u fiirisid, shaki baa ku gelaya oo waxaad is leedahay meesha habaar kama marna! Yaraanteydii baan maqli jirey, ruuxii baras ku dhaco abtigiis baa habaaray.
Waa iga su’aale, Yaa Soomaalida reer abti u ah? Tolow ma rixinkii baan goynay? Waa iga dhabe, horta ma nala habaaray mise waa nala sixray mise il baa nugu dhacday mise sidatan baa naga dhab ah oo dad bukoo aan isu ogayn baan nahay!!!???
Haddii sheegashada Soomaalida la raaco, waxaynu nahay iska dhal, alyacni xubnaha oo dhammi waxay wada galaan Carab, afrikaankuna waa inoo reer abti . Haddii afrikaankiina aan yasno oo aan is kala weyn nahay, kana faaneyno, carabtiina ay na deyrisay. Maxaa inoo yaal? Iska dhalku dhibaato iyo faa’idoba waa leeyahay.Waa mare waxaa la yiraahdaa waa caqli badan yihiin, marka labaadna, waxaa iska riixa reer abtigood iyo reer adeerkoodba. Sida ku dhacda carruurta ay isu dhalaan waarid kala ah madow iyo caddaan. Ummad reer abtigood nacday oo inkirtay, oo nabsi ahaan, iyagiina aabbeyaashood inkireen, maxaa laga fili karaa?
Xataa waa adag tahay si aan reer adeerkeen ula xididno! Si kastoo Muslinimadu nooga dhexeyso, nooma ay quraan inay gabdhohooda asalka (carabta dhabta ah) ah na siiyaan! Dhankaas way ka cunsurisan yihiin reer galbeedka.
Waad heli kartaa nin carab ahoo inta gabar Soomaaliya soo doonay la siiyay (ama ay isa-siisay) oo xaflad loo sameeyey, laakiin, heli maysid nin Soomaali ahoo inta gabar carab ah soo doonay la siiyay xafladna loo dhigay. Hadduu jirana waa 0.0000000001%. Arrintani waa tusaalaha ugu qeexan ee muujinaya in reer adeerken na dayriyeen. Waxaa taas ka sii daran, marna ma is weydiisay inta uu le’eg yahay(tirakoob ahaan) waxtarka naga soo gaaray waddamada carabta (guudahaan), muddadii dheereyd ee jirka Soomaaligu isku dhex rafanayay?? Carabta samankaan joogta, cisada iyo xurmada Soomaalidu u hayso uma ay hayaan.
Marmarka qaarkood,waxaabad isleedahay virus Q(guba) xaggaa iyo dhanka reer adeerkeen buu naga soo galay. Bal u fiirso, inta ay tiro le’eg yihiin, haddana aysan midaysnayn. Waa ummad isku af iyo diinba ah, oo kala firiqsan, oo xataa awoodi kari waayay inay walaashood Falastiin yuhuudda ka dhacshaan. Laftigeenna, haddii gobol waliba uu noqon lahaa waddan gooni ah, oo meel dhexdeenna ahi ay qole kale qabsato, weligeen kama dhicineen.Tabtaas haatan Carabtu ku sugan tahay baan tegi lahayn. Afrikaankuba waa leeyahay virus (ka), laakiin waa xubno inta badan kala af iyo dhaqanba ah(tus.Kikuyo iyo Masai) oo isticmaarku isku kabay oo waddan ka dhigay. Isticmaarku , dadkii kala duwanaana waa isku kabay ,kuwii islahaana (sida Soomaalida)waa kala qoqobay oo qaybsatay…Inta arrini sidaa tahayna, Afrika weligeed ka bixi mayso wareer.
Sideedaba, jahliga (aqoon la’aanta) waxaa looga ciil baxaa waxbarasho; gaajadana cunno; cudurkana daawo ayaa loo raadshaa; geeriduna waaba xaq. Waxaanse xal iyo daawo loo heli doonin dhallan rogmadka(acculturation!) ku dhacaya jiilka ku dhashay ama iyagoo yaryar la keenay qurbaha (gaar ahaan Yurub, waqooyi Ameerika ). Waarid badan baa walwal iyo wareer iyo harjad qurbaha la fadhiya, oo si ay wax yeelaan iyo meelay ula cararaan carruurtooda aan garanaynin. Niman rooxaan qaba baa dalkoodii hooyo saar ku tumanaya! Halkay hadda joogaanna waaba xaruntii (HQ) shaydaanka, annaguna qaxooti baan ku nahay. Dhulkeeni iyo xataa waddamada Islaamka oo dhan shaydaanku wuxuu ku yahay qaxooti had iyo jeer layska naari karo oo bil kastoo Ramadaan la xiro!! Halkaanse waaba gurigiisii oo haddaad damacdid iska naar, adigaa naarmaya oo halis u ah in buufis kugu dhaco! Marka waa un weligaa dhufays ku jir!!! (waa sarbeeb & kaftan dhable wada socda!!!)
Waxaan qabaa in nasiibkeennu (biskoodkeennu) uu ku dhex jiro nasiibdarrada ina haysata, taasoo aan ula jeedo, inaan maanta fursad u heli karno inaan keligeen daawadeenna raadsanno. Shardiga ugu horreeya uguna muhiimsan waa in bal marka hore ruux waliba uu fahmo kuna qanco inuu buko!(baabul qanaaca).
Sida ruuxii aan wax garanayn laakiinse garansoon inuusan waxba garanayn, wax loo bari karo, ayaa ruuxi buka oo garansoon inuu buko, loo daaweyn karaa! In la wada buko, waxaa daliilkeeda, daqnashada, xanuunka iyo isnidaamiska (nooc xajiinta ka mid ah) ka dhasha, markii xubinta qof ku abtirsado laga taabto, riixo, ama looba dhowaado. Ama wadaad caalima ahow ama jaamici ahow ama mooryaan ahow,waa un la wada daqnanayaa. Nimaan boogi ku oolini ma jiro, hadduu jirana, waxbaa si ka ah!!!(ha qoslin…qosol nooma bannaanee!). Xanunka ina haya maahan mid inta Aspirin la liqo haddiiba laga boodayo. Waa la dacaraysan yahay (la sumeysan yahay!). Waa xanuun ka biskoodkiisu muddo dheer qaadanayo, waxaanse awoodi karnaa, Ilaahay idankiis, inaan facaha dambe ka badbaadinno, oo aan dhaxal uga dhigno wanaag oo idil…Intaan isdaba qabanno.
Ugu dambaystii, waxaan maqaalkayga ku soo gunaanadayaa sidatan:- Soomaalidu waxay tiraahdaa: Dagaal waa kadare, rag isbartaase waa door. Haddaba - Lays baray! – lakala adkaan waa! Laysma dhaamo! Dhafoorada na wada qiicaya! Lays wada murxi – meelina nooma fayooba! Wax walbaan isku soo falnay! xan, cay, habaar, nacalad, Inkaar, candhuufo, qandhuufo, haraati, jeega dharbaar, turaanturayn, legdin, dibir seexato, qoorsagaaro, feer iyo faralaab, ceego, hardi, handad, boob, dhac, bililiqo, dhaawac, kufsi ( gabar iyo habarba!), illaa la soo gaaray, “War nin yohow (ama – Ina adeerow) Ashahaado, inaan ku dilaan rabaaye!!!!!!” Oo inta looga dhabeeyey la dilay!!! Intaanan ilmada hadda iga timid iska tirin, akhristow, wax miyaa haray aan illoobay inaan xuso????????!!!!!!!!!!
Qolooyinka illaa haddadaan warmaha afaysanaya, ma nakhtiin bay rabaan mise qallaa ku jira??!??
Soomaaliyay, ama aan isdaba qabano ama oggolaada in nala xirxiro, si naloo daaweeyo.
Haddii ay noo suurowdo inaan marakan isdaba qabanno, oo aannu ku guulaysanno inay dib u soo noqdaan dowladnimadii, qaranimadii, marjaciyaddii, karaamadii, qiimihii, sharaftii, qabkii(dhanka suubban), qofnimadii, burjigii, barakadii, iyo RAGANIMADII luntay, waxaa dhici doonta, Ilaahay idankiis, inaan waddamo badan oo Afrikaan ah u noqonno tusaale lugu daydo – Hong kong, Switzerland, Singapore or Dubai of Africa –la noqdo.
Ilaahay mahaddiis, dhulkenna iyo baddeenuba waa wada bikro, oo waxaa ka buuxa amaba ceegaaga khayraad nooc walba leh. Bulshadeennu weli uma soo jeensan, sababtoo ah, iyagaa isu jeeda oo is gubaya. Dhulkeenna waxaa lagu qiyaasaa 637,657 km oo afargees ah, xeebteennu waa tan Afrika ugu dheer! Bal ka soo qaad in Soomaalidu tahay 10 malyan, haddii dhulkaas loo qaybiyo, immisaa qof walba ku soo aadaysa? Ma qof qadayaa jira?
Haddii aynu isla fahanno inaan buknoo daawo u wada baahan nahay, oo aan isku hadaf iyo mabda’ noqonno, oo aan diinteenna si kaamil ugu dhaqanno, oo aan tafaraaruqa ka dayno,
Waxaa dhici lahayd, inaynu ka xorowno ururada ku adeegta samafalka; waxaa dhici lahayd in waddamada deriska nala ahi ay dalkeenna shaqo ka soo raajicin lahaayeen; waxaa dhici lahayd in qurbajooggu dalkoodii ku soo noqon lahaayeen; waxaa dhici lahayd in laga badbaado saamaynta dhaqamada iyo caadooyinka xunxun ee reer galbeedka; waxaa dhici lahayd in guurkii iyo aqal dhiskii kala haadku hakiyey ay soo noqdaan; waxaa dhici lahayd…; waxaa dhici lahayd…; waxaa dhici…; waxaa…; wax…..; Yaa dhammayn kara!!!
Eebbow noo gargaar oo naga dhig kuwii
Dantooda iyo maslaxaddooda garta